WAALI: Tababare DHARKA La Baxaya Iyo Xamaasadda Horyaalka Premier League Ee Xili Ciyaareedka Dambe - Gool24.Net
WAALI: Tababare DHARKA La Baxaya Iyo Xamaasadda Horyaalka Premier League Ee Xili Ciyaareedka Dambe
Dharka oo dhan ayuu iska saarayaa, waxaanu dul seexanayaa mees muddo 30 daqiiqadood ah isaga oo qaawan.
Tababare Marcelo Bielsa, waxa uu xili ciyaareedka dambe lasoo gelayaa horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League isagoo xambaarsay khuraafaadkiisa iyo waalliyaha layaabka leh ee laga arkay intii uu shaqooyinka tababarenimo kusoo jiray.
Kooxdiisa Leeds United ayaa xalay Jimcihii usoo dallacday horyaalka Premier League oo ay ka maqnayd 16 sannadood, waxaana xamaasaddoodii hore loogu yaqaanay iyo colaaddii ka dhaxaysay Manchester United u raaci doona tababare Bielsa oo dhaqamo cajiib ah lagu yaqaano.
Sida ay sheegeen qaar ka mid ah ciyaartoydii uu soo layliyey, tababarahan ayaa maalin kasta oo kooxdiisa laga badiyo, waxa uu galaa meel gaar ah oo uu isku soo xidhaa, waxaana inta uu dharka oo dhan iska saaro uu dul seexdaa miis, halkaas oo uu ku jiro muddo 30 daqiiqadood ah.
Mark Gonzalez iyo Jose Pedo Fuenzalida oo ka tirsanaa xulka qaranka Chile xilligii uu Marcelo Bielsa tababaraha u ahaa, waxay indhahooda ku arkeen waxyaabo aanay rumaysan karin oo uu samaynayay tababarahani.
Ciyaar xulka Chile guul-darro kasoo gaadhay oo Ecuador ay ku garaacday, Bielsa ayaa si toos ah u galay qolka lebbiska, gaar ahaan qaybta lagu daaweeyo ciyaartoyda dhaawacyadu soo gaadhaan, waxaana isagoo qaawan uu dul jiifay saacad badhkeed.
Mark Gonzalez oo u warramay Abrazo de Gol ayaa sheekadan cajiibka ah ka sheekeeyey, waxaanu yidhi: “Bielsa wuxuu galay qolka lebbiska. Waxa jiray qol labbis oo kale oo ku xigay kaayaga, waxaanu isagu ku jiray qolkaas kale.
“Waxaanu ugu galnay halkaas isaga oo qaawan oo dul jiifa miiska daaweynta, sidii qof lagu samaynayo qalliin oo kale ayuu ahaa. Muddo 30 daqiiqadood ah ayuu isagoo aan wax dhar ah xidhnayn halkaas jiifay.”
Fuenzalida ayaa isaguna arrintan oo kale goob-joog uga soo noqday Marcelo Bielsa, kulan uu xulka qaranka Talyaanigu dirqi kaga badiyey Chile, waxaanu yidhi: “Anigu marar badan ayaan arkay arrintan. Kulan Talyaanigu nagaga badiyey 1-0 oo ay ciyaartooyo badan naga maqnaayeen, wuxuu xataa la dagaallamay tababaraha xulka Talyaaniga. Wuxuu isaga oo cadhaysan galay qolka lebbiska, markii aanu ka dabo galnayna, wuxuu u soconayay sidii wax waalan oo wuu meeraysanayay, kaddibna wuxuu iska dhigay dharka.”
Si kastaba, Bielsa iyo khuraafaadkiisu waxay kusoo fool leeyihiin Premier League oo ay xili ciyaareedka dambe ka dheeli doonto kooxdiisa Leeds United, waxaana la eegi doonaa waxa uu samayn doono.